August 14, 2008, 4:56 am
Comment by TL August 14, 2008 @ 6:22 am
Comment by Ko Paw August 14, 2008 @ 6:40 am
မြန်မာ့အရေးကို တကယ် စွန့်လွှတ်ပြီး လုပ်တဲ့သူရော၊ မလုပ်တဲ့သူရော တူညီချက်သောဆန္ဒကတော့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြှင့်မားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကမ္ဘာ့နဲ့ယှဉ် ရင်ဘောင်တန်းကာ ငါ … မြန်မာ လူမျိုးဟေ့လို့ ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ပြောချင်ကြမှာပါ။
Comment by Lun Lunn August 14, 2008 @ 7:13 am
Comment by Lun Lunn August 14, 2008 @ 7:18 am
Comment by Moe Cho Thinn August 14, 2008 @ 5:35 pm
Comment by TZA August 14, 2008 @ 7:02 pm
Comment by YeKyawAungMDY August 15, 2008 @ 2:46 pm
this isavery mature way of write up, which did not mixed with emotions. keep up.. 🙂 zy
Comment by Anonymous August 17, 2008 @ 1:15 am
Comment by Anonymous August 23, 2008 @ 3:53 pm
I heard news that “Lin Let” been arrested and they will deport her to “Thailand”.
Comment by Anonymous August 27, 2008 @ 5:38 pm
ကျွန်မ ကိုယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ် အလုပ်များနေခဲ့တာပါရှင်။ အဖမ်းမခံရပါဘူး။ ဘယ်ကဘယ်လို သတင်းမှားတွေ ထွက်နေကြပါလိမ့် .. ။ နောက်၁နှစ်ထိတော့ စင်္ကာပူမှာ နေခွင့်ရှိပါသေးတယ် .. ။ နောက်၁နှစ်ရောက်မှပဲ ဘာဖြစ်မလဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ .. 🙂
Comment by LIN LET KYAL SIN August 28, 2008 @ 1:56 am
အေးလေ အခုပဲကြည့်လေ…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မရှက်တတ်ဘူး အခုထိ..နင်တို့ လို လေထဲက ပြောတဲ့သူတွေရှိလို့ လည်း ဟိုမှာ တကယ်ခံသွားရတဲ့သူတွေက ခံသွားရတာပဲ.. နင်တကယ်ဒီလောက် နားလည်ပါတယ်.. ပေးစပ်နိုင်ပါတယ်ဆို အခုပါသွားတဲ့ထဲမှာ ဘာလို့ ပါမသွားတာလဲ.. ပြောတော့ဖြင့်တစ်လုံးတစ်ခဲပီးရင် ဘယ်နားသွားနေ နေမှန်းမသိဘူး.. ပီးသွားရင် ပြန်ပေါ်လာပြန်ပီ.. ဒါနင်တို့ သောက်ကျင့်ပဲ.. အေး ငါ့ကွန်မန်ကို ဖျက်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. နင်ဖတ်ရင် ပီးတာပဲ.. ရှက်တတ်ရင် တော်တော်ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဟာ.. တွေးရင်းတွေးရင်း နင်တို့ လိုလေသမားတွေကိုပဲ ပိုပီးသောက်မြင်ကပ်လာတယ်.. လုပ်လိုက်ပါ့လား.. အောင်မလေးရေထဲမိုးထဲဆို ဘယ်မှာမှန်းမသိဘူး.. ပီးရင်တော့ပြောပါပီ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင် သူ့ ကိုမမှီသလို ဘာလိုလို.. လေးစားလောက်ပါပေတယ်.. အမိ.. နဖူးလေးပေါ်လက်တင်ပီး ဖြေး၂လေး တွေးကြည့်ပါအုံး..
Comment by http://www.pankyaung.blogspot.com August 31, 2008 @ 7:40 am
ကြောင်လှချည်လား pankyaung. အခုလို လာပြောကတည်းက တော်တော်ကြောင်နေပြီဆိုတာ သိသာတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ မိမိရောက်ရာနိုင်ရာမှာ မိမိနိုင်တာလေးပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဟာ စာရေးသူ .. ။ စာရေးသူပါဆိုမှ စာမရေးဘဲ လက်နက်သွားကိုင်ရမှာလားရှင်။ စင်္ကာပူကနေ ထွက်သွားရတယ်ဆိုတာ ဘလိုင်းကြီး ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ နေထိုင်ခွင့်ကုန်မှ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ။ အကုန်လုံး တပြုံကြီး မထွက်သွားရသေးလို့ နေထိုင်ခွင့်ကျန်နေသေးတဲ့လူတွေကို စော်ကားမော်ကား ရှင်အခုလိုပြောနေတာ ဘယ်လောက် စဉ်းစားအသိဥာဏ်နည်းလဲဆိုတာ အံ့ပါရဲ့ရှင်။ အခုလို ကြောင်တောင်တောင် ကွန်မန့်ကို တင်ပေးရတာပဲ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေပါပြီ။ အချိန်ပေးပြီး ကျွန်မစာတွေလာဖတ် ၊ ဒေါသထွက်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
Comment by LIN LET KYAL SIN September 1, 2008 @ 2:13 am